Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fanoloana ireo fiaramanidina mpiady any Canada amin'ny vaovao
Androany, nanambara ny Governemanta Kanada fa taorian'ny fanombanana ireo tolo-kevitra natolotra, dia 2 ireo mpanao tolo-bidy no mijanona ho mendrika amin'ny alàlan'ny fizotry ny fividianana fifaninanana ho an'ny Future Fighter Capability Project:
• Governemanta Soedoà—SAAB AB (publ)—Aeronautika miaraka amin'ny Diehl Defense GmbH & Co. KG, MBDA UK Ltd., ary RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd., ary
• Governemanta Etazonia—Lockheed Martin Corporation (Lockheed Martin Aeronautics Company) miaraka amin'i Pratt sy Whitney.
Ny tolo-kevitra dia nodinihina tamin'ny fomba hentitra momba ireo singa amin'ny fahaiza-manao, ny vidiny ary ny tombontsoa ara-toekarena. Nisy ihany koa ny fanombanana ny fiantraika ara-toekarena.
Amin'ny herinandro ho avy, Canada dia hamita ny dingana manaraka amin'ny dingana, izay mifototra amin'ny famakafakana bebe kokoa momba ny tolo-bidy 2 sisa, dia mety ahitana ny firosoana amin'ny fifampiraharahana farany miaraka amin'ny mpanafatra ambony indrindra na ny fidirana amin'ny fifanakalozan-dresaka fifaninanana, izay ahafahan'ireo 2 ambiny. homena fahafahana hanatsara ny tolo-keviny.
Ny Governemanta Canada dia manohy miasa amin'ny mari-pankasitrahana amin'ny 2022, miaraka amin'ny fandefasana fiaramanidina hatramin'ny 2025.
• Ity fividianana ity no fampiasam-bola lehibe indrindra ao amin'ny RCAF tao anatin'ny 30 taona mahery ary tena ilaina amin'ny fiarovana ny fiarovana sy ny fiarovana ny Kanadianina ary ny fanatanterahana ny adidy iraisam-pirenena.
• Nanangana dingana fifaninanana misokatra sy mangarahara ny Governemanta Kanada mba hahazoana fiaramanidina mpiady vaovao tamin'ny taona 2017.
• Ny tompon'andraikitra dia nanao fifampiraharahana be dia be tamin'ireo mpamatsy, anisan'izany ny fiaramanidina Kanadiana sy ny indostrian'ny fiarovana, mba hahazoana antoka fa tsara toerana izy ireo handray anjara amin'ny fividianana.
• Nisy fangatahana ara-dalàna momba ny tolo-kevitra navoaka ho an'ireo mpamatsy mahafeno fepetra tamin'ny Jolay 2019. Nikatona izany tamin'ny Jolay 2020.
• Ny politikan'ny tombontsoa ara-indostrialy sy ara-teknolojia ao Canada, anisan'izany ny tolo-kevitra momba ny sanda, dia mihatra amin'ity fividianana ity. Antenaina hiteraka asa sarobidy sy fitomboana ara-toekarena ho an'ny orinasa aerospace sy fiarovana kanadiana mandritra ny am-polony taona maro izany.
• Manara-maso ny dingana manontolo ny mpanara-maso tsy miankina iray mba hiantohana ny filaharana ho an'ny mpanao tolo-bidy rehetra.
• Nisy ihany koa mpandinika tsy miankina amin'ny antoko fahatelo nirotsaka an-tsehatra hanombana ny kalitao sy ny fahombiazan'ny fomba fividianana.